सामसुंगको ग्यालेक्सी जे थ्री (२०१६) सिरिज सार्वजनिक, बाईक चालकका लागि विशेष फीचर - Technology Khabar
» स्मार्ट फोन » सामसुंगको ग्यालेक्सी जे थ्री (२०१६) सिरिज सार्वजनिक, बाईक चालकका लागि विशेष फीचर
सामसुंगको ग्यालेक्सी जे थ्री (२०१६) सिरिज सार्वजनिक, बाईक चालकका लागि विशेष फीचर
Technology Khabar १९ चैत्र २०७२, शुक्रबार
काठमाडौं, १९ चैत । सामसुंगले ग्यालेक्सी सिरिजमा नयाँ स्मार्टफोन ग्यालेक्सी जे थ्री (Galaxy J3) को नयाँ संस्करण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले मिड रेन्ज फोनको रुपमा ल्याएको यो फोनमा नयाँ फीचर ‘एस बाइक मोड’ (Samsung S Bike) पनि लन्च गरिएको छ ।
सामसुंग ग्यालेक्सी जे थ्री (२०१६) मा भएको यो मोडको प्रयोगबाट तपाईँले बाईक चलाईरहेको समयमा नोटिफिकेशनबाट समस्या हुनेछैन् । यो फीचरले बाईक चलाउन रोकिने बित्तिकै स्वचालितरुपमा तपाईँलाई कल गर्नका लागि अटोमेटिक म्यासेज पठाउने छ ।
एस बाईक फीचर मूख्य गरि ‘डू नट डिस्टर्ब’ फीचर हो, जसले बाईक चलाईरहेको बेला अनावश्यक अल्मल्याउने गतिबिधिलाई रोक्दछ । यसले म्यासेज पठाएर फोनधनी बाईक चलाईरहेको र अहिले फोन रिसिभ गर्न नसक्ने जानकारी पठाउँछ । यदि अर्जेन्ट कल आएको बेलामा भने १ अंक थिचेर फोन गर्न सकिन्छ ।
ग्यालेक्सी जे थ्री स्मार्टफोनमा ५ इन्चको एचडी सूपर एमोलेड डिस्प्ले राखिएको छ, जसको पिक्चर रिजोल्यूशन १२८०x७२० पिक्सेल रहेको छ । यो फोनमा १.५ गीगाहर्जको क्वाड-कोर प्रोसेसर छ भने १.५ जीबीको र्याम तथा ८ जीबीको इन्टरनल स्टोरेज राखिएको छ, जसलाई बढाउन सकिन्छ ।
सामसुंगको नयाँ फोनमा ८ मेगापिक्सेलको रियर क्यामरा तथा ५ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामरा राखिएको छ । यसमा २,६०० एमएएचको ब्याट्री प्याक रहेको छ ।
दुई सिम सपोर्ट गर्ने यो फोनमा कनेक्टिभिटीका लागि फोरजी एलटीई, ब्लूटूथ तथा वाईफाई छ ।
भारतीय बजारमा मात्र हाल सार्वजनिक भएको यो स्मार्टफोनको मूल्य भारु ८,९०० अर्थात १४ हजार २ सय ४० रुपैंयाको हाराहारीमा तोकिएको छ ।
यो फोन स्न्यापडीलमा मात्र खरिद गर्न सकिनेछ भने जे थ्री (२०१६) किन्दा भारु १,५०० बराबरको फ्रीचार्ज क्रेडिट अफर उपलब्ध हुनेछ ।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०७२, शुक्रबार
वानप्लस सेभेन स्मार्टफोन ५जी प्रविधिसहित आउने, अरु पनि नयाँ फीचर
८ फाल्गुन २०७५, बुधबार
भारतमा केहि सेकेण्डमा नै पाँचौं पटक ‘सोल्ड आउट’ भयो चाइनीज एप्पल
४ भाद्र २०७१, बुधबार
विश्वको पहिलो पाँचवटा क्यामरा सेटअप भएको स्मार्टफोन आउँदै, जनवरीमा सार्वजनिक हुने
१५ पुष २०७५, आईतवार
मोबाइल हराए प्रहरीलाई खबर गर्नुस्, खोजेर तपाईँलाई बुझाउँछ
२३ माघ २०७५, बुधबार
एप्पलले पायो डिस्प्ले भित्र हुने फिंगरप्रिन्ट सेन्सरको पेटेन्ट, आगामी आइफोनहरुमा आउन सक्ने
३ पुष २०७६, बिहीबार
ल्यापटप किबोर्ड खराब भयो? यी ६ तरीका अपनाउनुस् र आफ्नो किबोर्ड नयाँ जस्तै बनाउनुहोस्!
सिटिईभीटीको नर्सिङ कार्यक्रममा निशुल्क छात्रवृत्तिमा भर्ना माग, यसरी दिनुस् अनलाइन आवेदन
तपाईँको ल्यापटपको स्पीड पनि स्लो भयो, यी उपाय अपनाएर आफैं स्पीड बढाउनुस्
५ मंसिर २०७८, आईतवार
आफ्नो पुरानो फोन बेच्नुअघि यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्, सानो लापरवाहीले ठूलो नोक्सानी ल्याउन सक्छ
नबिल बैंकको ‘नबिल डिजिबैंक पोर्टल’ सार्वजनिक
युरोपेली संघले दूरसञ्चार सेवाहरुमा सन् २०२७ देखि न्यून थोक दरहरू लागू गर्ने
एप्पललाई दश वर्षमा पहिलो पटक आईफोन र आईप्याडको उत्पादन रोक्नुपर्ने बाध्यता
ओपो ईन्नो डे २०२१ मार्फत अत्याधुनिक एनपीयू र नयाँ स्मार्ट ग्लास अनावरण गर्ने ओपोको तयारी
पेट्रोल पम्पलाई चार्जिङ स्टेशनका रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ :अर्थमन्त्री शर्मा
बिएमडब्लूको दशौं लाख ‘विद्युतीकृत’ गाडीहरू उपलब्ध गराउने लक्ष्य पूरा
टोयोटाले अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिनामा १.२९ अर्ब डलरको ब्याट्री प्लान्ट निर्माण गर्ने
भिभो पनि अब इलेक्ट्रिक भेहिकल सेग्मेन्टमा प्रवेश गर्दै, इलेक्ट्रिक बाइक र स्कुटर ल्याउने